Home Wararka Maanta Yuusuf Garaad oo ka digay arrin ka dhici karta doorashada madaxweynaha
Yuusuf Garaad oo ka digay arrin ka dhici karta doorashada madaxweynaha
Muqdisho (Allbanaadir Media) – Yuusuf Garaad Cumar oo ah Ergayga gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed oo qoraal uu soo saaray kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan doorashada beri ka dhaceysa Afisyoone.
Yuusuf Garaad oo horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa farriin u diray xildhibaanada isagoo ugu baaqay inaysan ka shaqeyn danta qof kale.
“Baarlamaanku ha ka feejignaado “Murashax” aan ujeeddadiisu ahayn in isaga la doorto,” ayuu yiri wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kadib qoraal uu soo dhigay Facebook.
Wuxuu intaas kusii daray “Keliya wuxuu meesha u soo istaagi doonaa in la siiyo mikrafoonka, si uu toos ama tilmaan uu Xildhibaannada uga codsado in ay diidaan murashax uu isagu diiddan yahay, doortaanna mid kale oo uu isagu doonayo.Hore ayay u dhacday. Aan wax ka baranno.”
Hadalka Yuusuf Garaad ayaa kusoo aadayo xilli musharixiin badan oo isku diiwaan geliyey tartanka madaxweynimo ee Soomaaliya ay rajeenayaan in loo ogolaado inay xildhibaanada la hadlaan inta aysan bilaaban doorashada kadibna ay shaaciyaan inay is casileen sida dhacday doorashooyinkii hore.
Guddiga doorashada madaxweynaha ee Labada Aqal ayaa la filayaa inay illaa caawa soo saaraan jadwalka doorashada Berri iyo dadka khudbadaha la siin doono, inkastoo uu khilaaf ka taagan yahay arrintaas.
Qaar ka mid ah musharixiinta ayaa ku talinaya in khudbad la siiyo kaliya qofka Aayadaha Qur’aanka ku furayo kulanka Baarlamaanka kadib si toos ah loo galo doorashada oo aan qof kale loo ogolaan inuu xildhibaanada la hadlayo si uu ugu leexiyo jiho kale.